I-USA Itafile yeTennis kunye neBlossom Ihotele iHouston ngoku Joyina iMikhosi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » I-USA Itafile yeTennis kunye neBlossom Ihotele iHouston ngoku Joyina iMikhosi
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-USA Table Tennis (USATT) kunye neBlossom Holding Group namhlanje babhengeze ukuba iBlossom Hotel Houston ibizwe ngokuba yi-Official Hotel ye-USATT. Ngaphantsi kwesivumelwano, iyunifomu yeqela lesizwe laseMelika leTennis Tennis iyakubonisa uphawu lweBlossom Hotel Houston, ihotele ekhethekileyo enqabileyo ephezulu esembindini wedolophu iHouston.
I-Blossom Ihotele iHouston ijonge phambili ekunikezeleni abadlali beTafile yeTennis yase-USA kunye nabalandeli amava obumnandi kunye nokunyaniseka kokubuka iindwendwe kwaseHouston.
Kukumgama wokuhamba wesithili esidumileyo semyuziyam kwaye ujikelezwe ziivenkile, ukutya kunye neendawo zokuzonwabisa.
I-Blossom Hotel iHouston inokwaziwa kakhulu ngokubuyisela kuluntu lwaseHouston.
“Siyavuya kakhulu ukwamkelwa IBlossom Ihotele iHouston kusapho lwe-USATT, utshilo iGosa eliyiNtloko lesiGqeba saseVirginia Sung. “Ihotele ayisiyondawo intle kuphela, nezinto zobunewunewu ezinobunewunewu obumangalisayo, kodwa neqela lobunini libonakalise ukuzibophelela ekuzinikeleni ekuphuculeni iimeko zabantu abahlala kuluntu lwaseHouston. Iqela lesizwe laseMelika liyazingca ngokunxiba uphawu lweBlossom kuyo yonke imisitho yethu yaseburhulumenteni. ”
“Kulilungelo lethu elikhulu ukusebenzisana neTafile Yentenetya yase-USA kwaye sinika inkxaso yethu nokwamkelwa kweembaleki ezingummangaliso kwiqela lesizwe lase-US iTennis Tennis,” utshilo u-CEO we-Blossom Houston Hotel, u-Charlie Wang. "Njengeyona hotele intsha yaseHouston, sijonge phambili ekunikezeleni abadlali beTafile yeTennis kunye nabalandeli amava obumnandi obukhethekileyo baseHouston."
Ummelwane weZiko lezonyango laseTexas elidume kwihlabathi liphela kwidolophu yaseHouston, IBlossom Ihotele kukumgama wokuhamba wesithili esidumileyo semyuziyam kwaye ujikelezwe ziivenkile, ukutya kunye neendawo zokuzonwabisa. Iyahambelana nesiteketiso sikaHouston njengesiXeko sasemajukujukwini, iBlossom inezinto zoyilo eziphefumlelweyo zenyanga. Ngamagumbi okundwendwela angama-267, eli ziko linemigangatho elishumi elinesithandathu linikezela ngaphezulu kweenyawo ezingama-9000 zendawo yokuhlangana eguqukayo kunye neziko lobugcisa bePeloton®. IBlossom ikhutshiwe kunye nephuli ephahleni kunye nendawo yokuhlala enika umbono ocacileyo wedolophu yaseHouston.
Ekuqaleni kwayo, iBlossom Hotel Houston inokwaziwa ngokubuyisela kuluntu lwaseHouston. Ukongeza ekunikezeleni ingqesho kubahlali bendawo ngemisebenzi engaphezulu kwe-150 ebonelelwe ngexesha lokuphakama kwesifo, ubunini beBlossom bukwabonelele ngezixhobo kunye nobuchule bokunceda abantu abasweleyo ngexesha lesitshingitshane sasebusika esenzakalisayo eTexas, njengomnini uCharlie Wang Inkampani yokwakha ilungisa umonakalo odalwe yimibhobho yamanzi kwiintsapho ezingaphezu kwe-120 zalapha.
Ilogo yehotele iBlossom iya kubonakala kwiiyunifom zeQela leSizwe laseMelika ukuqala kwangoko.